စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ: Amazing Water Therapy
Home သုတပဒေသာ Amazing Water Therapy
Post under သုတပဒေသာ at 5/12/2010 12:39:00 AM Posted by kyaw myo
Amazing Water Therapy လို့ ပေးထားပြီး ရေးသားသူက Dr.Mahmoud Hussian (IBN SINA Company) ဖြစ်ပါတယ်။ ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ ရောဂါများကတော့…
-Blood Pressure/ Hyper Tension (သွေးတိုး)
-Anemia (Blood Shortage) (သွေးနီဥနည်းခြင်း)
-Rheumatism (Pain in joints/ muscles) (လေးဘက်နာ)
-General Paralysis (လေဖြတ်ခြင်း)
-Arthritis (အဆစ်အမြစ် နာကျင် ရောင်ရမ်းခြင်း)
-Leukemia (သွေးဖြူဥများခြင်း/ သွေးကင်ဆာ)
-Pulmonary Tuberculosis (တီဘီရောဂါ)
-Kidney Stones (ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်ခြင်း)
-Urogenital Diseases (ဆီးလမ်းကြောင်း ရောဂါများ)
-Hyper Acidity (အက်ဆစ်ဓါတ်များခြင်း)
-Uterus Cancer (သားအိမ်ကင်ဆာ)
-Rectal Prolapse (လိပ်ခေါင်းရောဂါ)
-Eye Diseases (မျက်လုံးနှင့် ပတ်သတ်သောရောဂါများ)
-Ophthalmic Hermorrhage & Opthalmia (Reddish eye)
-Irregular Menstruation (ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ဓမ္မတာလာခြင်း)
-Breast Cancer (ရင်သားကင်ဆာ)
-Laryngitis (အသံအိုး ရောင်ခြင်း)
-Headache (ခေါင်းမူး/ ခေါင်းကိုက်ခြင်း)
သူရဲ့နည်းလမ်းက အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မနက်အိပ်ယာ ထထခြင်း (သွားမတိုက်သေးခင်) ရေသောက်ပေးဖို့ပါ။ ပမာဏကတော့ ၁.၅လီတာ.. ဖန်ခွက် ၅ ခွက်ကနေ ၆ခွက်ကြားပါ။ (ကျွန်တော်ကတော့ အအေးဗူးခွံ ၁.၅လီတာ ဗူးထဲ ထည့်သောက်ပါတယ်) ပြီးမှ.. မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက် အလုပ်ကို စနိုင်ပါပြီတဲ့။
ဒီနေမှာ.. အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက် ဂရုပြုဖို့ကတော့ တခြားအရည်များ (ကော်ဖီ၊ လဘ္ကရည်စသည်..) နှင့် အစာများကို ဤရေပမာဏမသောက်သုံးခင်နဲ့ သောက်သုံးပြီး တစ်နာရီအတွင်းမှာ မစားမိဖို့ပါပဲ။
အစပိုင်းတော့ အဲဒီလောက်ရေပမာဏကို တစ်ခါတည်းနဲ့ သောက်ရတာ မလွယ်ကူဘူးခင်မျ.. ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း အလေ့အကျင့်ရလာပါလိမ့်မယ်… (ကျွန်တော်လည်း ကျင့်နေဆဲ ကာလပေါ့..) လေ့ကျင့်ခါစမှာ ဖန်ခွက် ၂ ခွက်စီကို ၂မိနစ်လောက် ခွဲသောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ၁နာရီအတွင်းမှာတော့ ၂ ကြိမ်ကနေ ၃ ကြိမ်အထိ ရှူရှူး ပေါက်ချင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာချက်တွေအရ.. အောက်ပါရောဂါတွေကို ဖော်ပြထားတဲ့ ရက်တွေအတွင်းမှာပင် ကုသနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်..
-Constipation - 1 day (ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ၁ ရက်)
-Acidity -2days (အက်ဆစ်ဓါတ်များခြင်း၊ ၂ ရက်)
-Diabetes -7days (ဆီးချို၊ ၇ ရက်)
-Cancer -4weeks (ကင်ဆာ၊ ၄ပတ်)
-Pulminory TB -3months (တီဘီ၊ ၃လ)
-BP & Hypertension -4weeks (သွေးဖိအားများခြင်း၊ ၄ပတ်)
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်တော့ ကုသနိုင်တယ်ဆိုတာ သက်သာနိုင်တဲ့ အခြေအနေလို့ပဲ ယူဆပါတယ်. လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်မယ် ထင်တယ်။
လေးဘက်နာနဲ့ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း အစရှိတဲ့ ရောဂါ ခံစားနေရသူများအတွက်တော့ ဒီ နည်းလမ်းကို မနက်တစ်ကြိမ်၊ နေ့လည်တစ်ကြိမ်နဲ့ ညတစ်ကြိမ်၊ (သို့မဟုတ်) တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ အစာမစားမီ တစ်နာရီခွာပြီး အသုံးပြုနိုင်တယ်..
ထိုကဲ့သို့ ရေကို နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို သန့်စင်စေပါတယ်.. အစာအိမ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အူမကြီးကနေ သွေးအသစ် ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ပိုမိုအကျိုးပြုပေးပါတယ်. ဆေးပညာအရ “Heamatopaises” လိုခေါ်တွင်ပါသတဲ့။ အူများအတွင်းမှာရှိတဲ့ Mucousal fold လို့ခေါ်တဲ့ အကျိအချွဲများဟာ အဓိက သွေးအသစ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတာ ဖြစ်ပြီး (သီအိုရီအရ) သူတို့ကို ရေအလုံလောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် အလုပ်ပိုမိုတွင်ကျယ်စေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အူမကြီးဟာ သန့်စင်နေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် အကြိမ်များစွာ စားသုံးနေသမျှကို ကောင်းစွာ စုပ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ သွေးအသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို အထောက်အကူပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်.။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရောဂါကုသခြင်းနဲ့ ကျန်းမာခြင်းအတွက် ထိုသွေးအသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟာ အလွန်အရေးပါတာကြောင့် ဤနည်းလမ်းကို နေ့စဉ်ပုံမှန် လိုက်နာသင့်ကြောင်းပါ.။
ဒါကတော့ ကျွန်တော် တတ်သလောက် ဘာသာပြန်လေးပေ့ါ။ တချို့ ဆေးပညာဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းလေးတွေ (အထူးသဖြင့် ရောဂါနာမည်တွေ) ဘာသာပြန်ရာမှာ လွဲကောင်းလွဲနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိက ဆိုလိုရင်း ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ မထိခိုက်အောင် ဂရုစိုက်ထားပါတယ်။ အောက်မှာတော့ မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ပါ။
နေ့စဉ် အချိန်လေးနည်းနည်းစိုက်ပြီး ပိုက်ဆံလည်း အပိုမကုန်ဘဲ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် လိုက်နာသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်...
အားလုံး ကျန်းမာသုခ ရစေသောဝ်
- Drink six (6) glasses of water (1.5 litres) everyday and avoid medicine, tablets, injections, diagnosis, doctor fees, etc.
- You can never believe before practicing.
List of Diseases that can be cured by water tharapy
-Blood Pressure/ Hyper Tension
-Anemia (Blood Shortage)
-Rheumatism (Pain in joints/ muscles)
-host orthobics Hostorthobics
-Early morning, after you get up from bed, (without even brushing your teeth) drink 1.50 litres of water i.e.,5to6glasses. You may wash you face thereafter.
-Here it is very essential to note that nothing else, neither drinks nor solid food of any sort should be taken within 1 hour before and after drinking these 1.5 litres of water.
-If required, boiled and filtered water may be used for this purpose.
-It is difficult to drink 1.5 litres of water at one time, but you will get used to it gradually.
-Initially, while practicing you may drink four glasses first and to balance two glasses afteragap of two minutes.
-You may find the necessity to urinate2to3times within an hour, but it will become normal after quite some time.
-The following diseases are observed to be cured within this therapy within the indicated days as below:
-Constipation - 1 day
-Acidity -2days
-Diabetes -7days
-Cancer -4weeks
-Pulminory TB -3months
-BP & Hypertension -4weeks
Note: It is advised that persons suffering from Artheritis or Rheumatism should practise this therary thriceaday, i.e. morning, midday and night, 1 hour before meals for one week; and twiceaday subsequently until the disease disappears.
- Consuming ordinary drinking water by the right method purifies human body. It renders the colon more effective by forming new fresh blood, known in medical terms as "Heamatopaises". That the mucousal folds of the colon and intestines are activated by this method. is an undisputed fact, just as the theory that new fresh blood is produced by the mucousal fold.
- If the colon is cleansed then the nutrients of the food taken several timesaday will be absorbed and by the action of the mucousal folds they are turned into fresh blood. The blood is all important in curing ailments and restoring health and for this water should be consumed inaregular pattern.
0 comments: on "Amazing Water Therapy"